दुखद खबर ! विवाह गर्न नमान्दा डाक्टरले गरे आफ्नै प्रेमिकाको घाँ’टी थिचे’र ह’त्या – Wow Sansar
भारतमा विवाह गर्न नमानेको भन्दै प्रेमीले आफ्नै प्रेमिकाको ह’त्या गरेका छन्। उत्तरप्रदेशको आगरामा २६ वर्षीया डा. योगिता गौतमको ह’त्या गरेको आरो’पमा प्रहरीले उनका प्रेमी डा. विवेक तिवारीलाई प’क्राउ गरेको हो।
योगिता र विवेक केही वर्षदेखि प्रेमसम्बन्धमा थिए। विवेक योगिताका एमबिबिएस पढ्दाताकाका सिनियर हुन्। उनी अहिले कानपुर जिल्लाको मेडिकल अफिसर थिए। उनले योगिताको ह’त्या गरेको प्रहरीसमक्ष स्वीकारेका छन्। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
विवेकले योगितासँग विवाह गर्न चाहेका थिए। योगिताले नमानेपछि उनले ह’त्या गरेको प्रहरीले बताएका छन्। मंगलबार जालौनमा रहेका विवेक योगितालाई भेट्न आगरा गएका थिए। भेटघाटकै क्रममा उनीहरूबीच वि’वाद सुरू भएको थियो। विवा’दकै विवेकले योगिताको घाँटी थिचेर ह’त्या गरेका थिए। तर उनी त्यतिमै रोकिएनन् योगिता मरेको पक्का गर्न च’क्कुले टाउको र मुखमा पटकपटक प्र’हार गरे
Prevसंसद् चल्दा कसैले उठाउन नसकोस् भनेर भुइँमा ठोकिए कुर्सी